Shiinaha 5XZC-7.5DS Nadiifiyaha Abuurka & Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | SYNMEC
5XZC-7.5DS Nadiifiyaha Abuurka & Darajeeyaha
Nadiifiyaha shinnida & grader wuxuu noqdaa mashiinka nadiifinta aasaasiga ah uguna jecel abuurka iyo warshadaha hadhuudhka ee suuqa caalamiga ah, oo leh hufnaan sare, wax qabad aad u wanaagsan, codsi balaadhan
Nadiifiyaha shinnida & grader waxaa loo isticmaalaa nadiifinta iyo qiimeynta abuurka, badarka, badarka, iyo alaabada kale ee granule.
Waxaa loo qalabayn karaa si ay ugu habboonaato shaqooyin iyo ujeedooyin gaar ah oo kala duwan.
5XZC-7.5DS nadiifiyaha shinnida labanlaabka ah waxaa inta badan loogu talagalay in laga saaro 100% wasakh khafiif ah sida qolof qolof ah, boodhka, caleemaha laamood ee boodhka HIRKA, walxaha waaweyn iyo kuwa yar yar. abuurka .Ma aha oo kaliya in ay ku habboon tahay shirkadda abuurka ,waxa ay sidoo kale ku habboon tahay beeralayda gaarka loo leeyahay in ay farsameeyaan oo ay nadiifiyaan GARABKA .
Dhammaan boodhka iyo wasakhda iftiinka waxaa ka saari kara marawaxad. Abuurka hadhuudhku wuxuu ku dul dhacaa lakabyada shaandhada waxaana lagu kala saaraa shaandho iyadoo loo eegayo kala duwanaanta ballaca iyo dhumucda. Dhammaan wasakhda waaweyn iyo samll ayaa laga saaray meelo kala duwan.
Naqshadeynta mabda'a shaqada:
Hadhuudhku waxa ay ku dhacaan sanduuqa soo gelista hadhuudhka ka dib shaandhaynta hawada, ka dibna gariirka hoostiisa boodboodka hadhuudhka oo u qulqulaya jirridda lakabka badan, ka dib miraha si fiican loo siman yahay waxay galaan shaandhada lakabka sare iyada oo loo marayo daah caag ah. Miraha la xushay ayaa ku dhici doona guddiga shaandheynta hoose ee xiga ka dib shaandhaynta, buunshaha iyo burburka ay xidheen shaandhada oo loo wareejiyo meesha wasakhda weyni ka baxdo. Miraha la doortay ayaa ku dhici doona lakabyada hoose ee shaandheynta, waxaana lagu kala saari doonaa heerar kala duwan oo ah cabbirrada kala duwan ee hadhuudhka iyada oo la shaandheynayo lakabyo kala duwan, taas oo ay sababtay lakabyada lakabyada shaandheynta waxay leeyihiin cabbir kala duwan. Miraha la xushay waxay u qulqulaan meelaha laga baxo ee hadhuudhka wanaagsan, ku buuxi bac ku dheggan bacda haynta. Koofiyadaha meelaha laga baxo waxa la isticmaali karaa marka bacaha shift-ka taasoo la macno ah in furku kuu dhawaan karo marka aad bacda bedesho. Waa socodka shaqada oo dhan ee kala soocida.
Isticmaal shaandho kala duwan habsocod kala duwan oo ah nooca badarka kala duwan. Daaqadaha fiirsashada ee jirridda shaandheynta ayaa loogu talagalay hubinta shaqada.
bandhig xagal badan
Qolka Hamiga (Wind Sieve)
Ka saaritaanka siigada, cawska, hey, qolof iyo wasakh kale oo khafiif ah oo ka baxaysa hadhuudhka.
Xakamee oo garaac oo hagaajiya farqiga u dhexeeya kanaalka (ballaaran xagga sare iyo xagga hooseba) si aad u hesho natiijo kala saarid hammi wanaagsan. Meesha laga saaro dhammaan wasakhda miisaanka khafiifka ah iyadoo iniin wanaagsan ay soo dhacayso.
habka boodhka ka saarida
Kala-duwayaasha duufaantu waa hab xirfad leh oo looga saaro walxaha hawada, gaaska ama dareeraha dareeraha ah, iyada oo aan la isticmaalin filtarrada.
Saamaynta wareega iyo cufisjiidka ayaa loo isticmaalaa in lagu kala saaro isku dhafka adkaha iyo dareeraha.
Qufulka hawadu waxa uu wasakhda ka sii daayaa wasakheeyaha dabaylaha boodhka oo ilaaliya cadaadiska hawada ee nidaamka hamiga
socodka abuurka kala soocida
Hadhuudh kor loogu qaaday wiish baaldi oo ku dhaca sanduuqa hadhuudhka hadhuudhka, halkaas oo socodka hadhuudhku si siman u firdhiso, haddii ay dhacdo in hadhuudhku hal dhinac ku ururo. Intaa ka dib hadhuudhku waxay ku dhacaan jirrid shaandho, wasakhda khafiifka ahna waxaa laga saaray hammi isku mar.
Hadhuudh kala firdhiyey waxay quudin jireen jirridda shaandhaynta si loo kala saaro. Qaybtan, hadhuudhka/abuurka waxaa lagu qiimeeyay xaashi galvanize ah oo daloolo kala duwan ku leh lakab kasta. Xajmiga weyn iyo cabbirka yar ee wasakhda ah ayaa lagu tuuray meelo kala duwan siday u kala horreeyaan. Abuurka nadiifinta kama dambaysta ah wuxuu ka soo baxaa meesha ugu muhiimsan.
Nidaamka nadiifinta hawada laba jeer
Tuubbada nuugida hawada laba jeer, kordhinta waxtarka nadiifinta,
Nuug wasakh khafiif ah oo dheeraad ah iyo boodh, ayaa ka dhigi doona midhaha badan
Gacanta qaabka Xiddiga
shaandho go'an, shaandhooyinku karaan
si fudud loo beddelo
Aad bay ugu habboon tahay in shaandhada la soo saaro. Macmiilku si fudud ayuu u beddeli karaa shaandhada marka uu nadiifinayo hadhuudh kale ama abuur.
Shaandhooyinka gudaha ku jira waxay ka samaysan yihiin bir galvanized ah oo waara. Waxaan u qalabayn doonaa dalool shaandho ku habboon iyadoo loo eegayo alaabta ceeriin ee macmiilka.
Si loo doorto shaandho qumman, muunadda abuurka (wax cayriin ah ayaa ka kooban wasakh) ama sawirka miraha miraha ayaa loo baahan yahay ka dib marka macaamiishu dalbadaan. Ogsoonow in shaandho go'an ay u qalabaysan tahay sida sahayda caadiga ah, oo kaliya loo isticmaalo abuur nooc ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Shaafto bir ah oo bir ah ayaa diyaar ah.
Loo isticmaalo in lagu wareejiyo alaabta (miraha). Lagu heli karo nooca go'an iyo midka dhaqaaqa labadaba si loo waafajiyo jawi shaqo oo kala duwan.
Waxay leedahay qaab dhismeed is haysta, interface saaxiibtinimo user, fududahay in la ilaaliyo, tamarta badbaadinta, fududahay in la nadiifiyo, hufan iska ilaali isku dhafka ah.
Golaha xakamaynta awoodda
Waxay leedahay sifada si fudud u shaqaynaysa, kaliya u baahan
isku xira awoodda. Siliggu waa 100% naxaas,
waxay dammaanad qaadaysaa tayada sare iyo muddada dheer ee isticmaalka nolosha.
Waxaan ku rakibnay qaab-dhismeedkii xamuulka iyo giraangiraha, si aad uga shaqeyso tuulada.
Cabirka (L×W×H) 3920*2430*3440mm
Cabirka shaandhada 1250*2400mm
Awoodda (tirinta sarreenka) 7.5t/saacaddii
Miisaanka 1.77 tan
Qufulka hawada 7.5kw
Wadarta Awoodda 9.9kw
Hore: 5XZC-15 Nadiifiyaha Abuurka & Darajeeyaha
Xiga: 5XZC-5DH Nadiifiyaha Abuurka & Darajeeyaha
Nadiifiyaha Abuurka Iyo Darajada
5XQS-L dhagax qarxiye shaybaarka miraha khudradda
5M-2 Warshada Farsamaynta Abuurka Wareegta
5PJ-5 mishiinka polishing bean /soybean mung bean...
5BY-13P Nooca Dufcada Mashiinka Dahaarka Abuurka
5XP-S Nooca Durbaanka Kahor Nadiifiyaha abuur ka hor nadiifinta m...